1 Samueri 14 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
1 Samueri 14:1-52
14 Zvino rimwe zuva Jonatani+ mwanakomana waSauro akati kumushandi akanga akatakura zvombo zvake: “Uya tiyambukire kuboka revarwi vanorinda revaFiristiya vari mhiri nechekoko.” Asi haana kuzviudza baba vake.+ 2 Sauro akanga achigara pamucheto peGibhiya+ pasi pomuti womupomegraneti uri muMigroni; uye vanhu vaaiva navo vaiva varume vanenge mazana matanhatu.+ 3 (Ahija mwanakomana waAhitubhu,+ mukoma waIkabhodhi,+ mwanakomana waFiniyasi,+ mwanakomana waEri,+ mupristi waJehovha wokuShiro,+ akanga akatakura efodhi.)+ Vanhu havana kuziva kuti Jonatani akanga aenda. 4 Zvino pakati pemikoto yaitsvakwa naJonatani kuti ayambukire kunorwisa boka revarwi vanorinda+ revaFiristiya pakanga paine ibwe rakaita sezino kuno kudivi rino uye ibwe rakaita sezino uko kurutivi urwo, rimwe rainzi Bhozezi uye rimwe racho rainzi Sene. 5 Zino rimwe raiva mbiru kuchamhembe rakatarira kuMikmashi,+ rimwe racho raiva kumaodzanyemba rakatarira kuGebha.+ 6 Naizvozvo Jonatani akati kumushandi wacho, mutakuri wezvombo zvake: “Uya tiyambukire kuboka revarwi vanorinda revarume ava vasina kudzingiswa.+ Zvichida Jehovha achatishandira, nokuti hapana chinotadzisa Jehovha kuponesa nevazhinji kana kuti nevashomanana.”+ 7 Mutakuri wezvombo zvake akati kwaari: “Itai zvose zviri mumwoyo menyu. Tsaukirai kwamunoda. Tarirai ndinemi, ndinobvumirana nezvinodiwa nomwoyo wenyu.”+ 8 Jonatani akabva ati: “Tarira tiri kuyambukira kuvarume vacho, tibude pachena vatione. 9 Kana vakati kwatiri, ‘Mirai kusvikira tasangana nemi!’ tichabva tamira patinenge tiri, hatifaniri kukwira kwavari. 10 Asi kana vakati, ‘Kwirai muzorwa nesu!’ tichabva takwira, nokuti Jehovha achavaisa muruoko rwedu, uye ichi ndicho chiratidzo chacho kwatiri.”+ 11 Naizvozvo vaviri vacho vakabuda pachena kuti vaonekwe neboka revarwi vairinda revaFiristiya. VaFiristiya vakati: “Tarirai vaHebheru vari kubuda mumakomba mavanga vakavanda.”+ 12 Naizvozvo varume veboka revarwi vairinda vakati kuna Jonatani nomutakuri wezvombo zvake: “Kwirai kwatiri, uye tichaita kuti muzive chimwe chinhu!”+ Jonatani akabva ati kumutakuri wezvombo zvake: “Kwira unditevere, nokuti Jehovha achavaisa muruoko rwaIsraeri.”+ 13 Jonatani akaramba achikwira nemaoko ake+ nemakumbo ake, mutakuri wezvombo zvake achimutevera; uye ivo vakatanga kuwa pamberi paJonatani,+ uye mutakuri wezvombo zvake akanga achivauraya ari shure kwake.+ 14 Zvino pakuuraya kwokutanga, Jonatani nomutakuri wezvombo zvake vakaparadza varume vanenge makumi maviri muinenge hafu yendima ingarimwa mueka yomunda. 15 Vanhu vaiva mumusasa waiva mumunda nevanhu vose veboka revarwi vanorinda vakabva vadedera;+ uye uto revapambi+ rakadedera, kunyange ivo, uye nyika yakatanga kudengenyeka,+ kukava kudedera kwakabva kuna Mwari.+ 16 Varindi vaSauro vaiva muGibhiya+ raBhenjamini vakazviona, uye, tarira! nyonganyonga yacho yakavheya kuno nokoko.+ 17 Zvino Sauro akati kuvanhu vaaiva navo: “Ndapota, verengai muone kuti ndiani abva kwatiri.” Pavakaverenga, vakaona Jonatani nomutakuri wezvombo zvake vasipo. 18 Zvino Sauro akati kuna Ahija:+ “Uya neareka yaMwari wechokwadi pedyo!”+ (Nokuti areka yaMwari wechokwadi yakanga iine vanakomana vaIsraeri pazuva iroro.)+ 19 Sauro paaitaura nomupristi,+ nyonganyonga yaiva mumusasa wevaFiristiya yakaramba ichipfuurira, ichingokura. Sauro akabva ati kumupristi: “Dzosa ruoko rwako.” 20 Nokudaro Sauro nevanhu vose vaaiva navo vakashevedzwa.+ Naizvozvo vakasvika kwairwiwa kwacho, wanei bakatwa romumwe nomumwe rakanga richirwisana nowokwake;+ nyonganyonga yacho yaiva huru kwazvo. 21 VaHebheru vakanga vambova vevaFiristiya+ uye vakanga vaenda navo mumusasa vachibva kwose kwose, naivowo vakatsigira vaIsraeri vaiva naSauro naJonatani. 22 Varume vose vaIsraeriwo vakanga vakavanda+ munzvimbo ine makomo yaEfremu vakanzwa kuti vaFiristiya vakanga vatiza, uye ivowo vakavadzingirira mukurwa. 23 Jehovha akaponesa+ Israeri pazuva iroro, kurwa kwacho kukapfuura kuBheti-avheni.+ 24 Zvino varume vaIsraeri vakanga vamanikidzwa kwazvo pazuva iroro, asi Sauro akapikira vanhu+ achiti: “Munhu anodya zvokudya manheru asati asvika uye kusvikira ndatsiva+ vavengi vangu ngaatukwe!” Hapana nomumwe wevanhu akaravira chokudya.+ 25 Vose vaya vomunyika yacho vakapinda muchisango, uchi+ pahwakanga huri pasi. 26 Vanhu pavakapinda muchisango, vakaona uchi huchidonha,+ asi hapana aiisa ruoko rwake pamuromo wake, nokuti vanhu vakanga vachitya mhiko yacho.+ 27 Asi Jonatani akanga asina kunzwa baba vake pavakapikira vanhu,+ naizvozvo akatambanudza muromo wetsvimbo yaiva muruoko rwake, akaunyika muzinga rouchi, akadzosa ruoko rwake kumuromo wake, maziso ake akatanga kupenya.+ 28 Mumwe wevanhu vacho akapindura akati: “Baba vako vapikira vanhu vachiti, ‘Munhu anodya zvokudya nhasi ngaatukwe!’”+ (Zvino vanhu vakatanga kuneta.)+ 29 Zvisinei, Jonatani akati: “Baba vangu vaunza dambudziko+ panyika. Ndapota, onai mapenyere aita maziso angu nokuti ndaravira uchi uhu hushomanana.+ 30 Zvakadini kudai vanhu vanga vadya+ nhasi zvakapambwa zvevavengi vavo zvavawana!+ Nokuti zvino hakuna kuurayiwa vaFiristiya vakawanda.”+ 31 Pazuva iroro vakaramba vachiuraya vaFiristiya kubvira kuMikmashi+ kusvikira kuAijaroni,+ uye vanhu vakaneta kwazvo.+ 32 Vanhu vakatanga kumhanyira zvakapambwa nokukara,+ vachitora makwai nemombe nemhuru, vachizviurayira pasi, vanhu vakadya pamwe chete neropa.+ 33 Naizvozvo vakaudza Sauro, vachiti: “Tarirai! Vanhu vari kutadzira Jehovha nokudya pamwe chete neropa.”+ Iye akati: “Manyengera. Tangai makungurutsira dombo guru kwandiri.” 34 Pashure paizvozvo Sauro akati: “Pararirai pakati pevanhu, muti kwavari, ‘Mumwe nomumwe wenyu, ngaaunze pedyo neni, nzombe yake uye, mumwe nomumwe, gwai rake, muurayire nokudyira munzvimbo ino, musatadzira Jehovha nokudya pamwe chete neropa.’”+ Naizvozvo vanhu vose vakaunza pedyo mumwe nomumwe nzombe yake yakanga iri muruoko rwake usiku ihwohwo uye vakaurayira ipapo. 35 Sauro akavakira Jehovha atari.+ Ndiyo atari yokutanga yaakavakira Jehovha.+ 36 Gare gare Sauro akati: “Ngatiteverei vaFiristiya usiku, tivapambe kusvikira kwaedza mangwanani,+ uye ngatisambosiya kana munhu mumwe chete pakati pavo.”+ Ivo vakati: “Itai zvose zvakanaka kwamuri.” Mupristi akabva ati: “Ngatiswederei kuna Mwari wechokwadi pano.”+ 37 Sauro akatanga kubvunza Mwari kuti: “Nditevere vaFiristiya here?+ Muchavaisa muruoko rwaIsraeri here?”+ Asi haana kumupindura zuva iroro.+ 38 Naizvozvo Sauro akati: “Uyai pedyo pano,+ imi mose varume vanokosha vevanhu,+ mutsvake muone kuti chivi ichi chauya sei nhasi. 39 Nokuti naJehovha mupenyu, uyo ari Mununuri waIsraeri, kunyange kana ari Jonatani mwanakomana wangu, achatofa chete.”+ Asi hapana akamupindura pavanhu vose. 40 Zvino akati kuvaIsraeri vose: “Imi muchava kudivi rimwe, uye ini naJonatani mwanakomana wangu—tichava kune rimwe divi.” Vanhu vakati kuna Sauro: “Itai zvakakunakirai.”+ 41 Sauro akati kuna Jehovha: “Haiwa Mwari waIsraeri, ipai Tumimu!”+ Jonatani naSauro vakabva vabatwa, vanhu vakabuda.+ 42 Zvino Sauro akati: “Kandai mijenya+ kuti musarudze pakati pangu nomwanakomana wangu Jonatani.” Uye Jonatani akabatwa. 43 Sauro akabva ati kuna Jonatani: “Ndiudze, Waitei?”+ Naizvozvo Jonatani akamuudza, akati: “Zvechokwadi ndaravira uchi hushomanana pamuromo wetsvimbo iri muruoko rwangu.+ Ndiri pano! Regai ndife!” 44 Sauro akati: “Mwari ngaaite saizvozvo uye ngaawedzere pazviri,+ kana chokwadi ukasafa,+ iwe Jonatani.” 45 Asi vanhu vakati kuna Sauro: “Jonatani anofanira kufa here, iye aponesa+ vaIsraeri zvikuru kudai? Hazvimboiti!+ NaJehovha mupenyu,+ hapana kana bvudzi rimwe+ romusoro wake richawira pasi; nokuti ashanda naMwari nhasi.”+ Naizvozvo vanhu vakadzikinura+ Jonatani, uye haana kufa. 46 Naizvozvo Sauro akadzoka pakutevera vaFiristiya, vaFiristiya vakaenda kunzvimbo yavo.+ 47 Sauro akava mambo waIsraeri,+ akarwisa vavengi vake vose vaiva kumativi ose, akarwisa Moabhi,+ akarwisa vanakomana vaAmoni,+ akarwisa Edhomu,+ akarwisa madzimambo eZobha,+ akarwisa vaFiristiya;+ uye kwose kwose kwaaitendeukira aivapa mhosva.+ 48 Akaita noushingi+ akauraya Amareki+ uye akanunura vaIsraeri muruoko rwomupambi wavo. 49 Vanakomana vaSauro vaiva Jonatani+ naIshivhi naMariki-shua,+ uye mazita evanasikana vake vaviri, akatanga kuberekwa ainzi Merabhu+ uye muduku wacho ainzi Mikari.+ 50 Mudzimai waSauro ainzi Ahinoamu mwanasikana waAhimaazi, uye mukuru weuto rake ainzi Abhineri+ mwanakomana waNeri, hama yababa vaSauro. 51 Kishi+ ndiye aiva baba vaSauro, uye Neri+ baba vaAbhineri akanga ari mwanakomana waAbhieri. 52 Kurwisana nevaFiristiya kwakaramba kwakasimba mazuva ose aSauro.+ Sauro paaiona chero murume upi zvake ane simba kana kuti chero munhu upi zvake akashinga, aimutora ogara naye.+